Sei KuFedora: Kuisa Fedora 17 DVD uye LiveCD | Kubva kuLinux
Sei KuFedora: Fedora 17 DVD uye LiveCD Kuisirwa
naPerseus | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Mune izvi How To Ini ndichakudzidzisa maitiro ekuisa Fedora DVD, sezvo uine mamwe marongero sarudzo, zvinogona kuvhiringidza mushandisi.
Musiyano uripo pakati peFedora LiveCD neFedora DVD
Tine mukana wekusarudza enzvimbo dzekushandisa nedesktop zvatiri kuda kuisa.Mamiriro edesktop ndeaya: Gnome Shell, KDE, XFCE, LXDE, Shuga, pakati pevamwe.
Chinangwa chayo kuisa (haisi LiveDVD).
Saizi yeDVD iri 3.7 uye 3.6 Gb zvinoenderana neyakavakirwa (i386 kana x86_64).
Iyo yakasarudzika desktop desktop ndeye Gnome Shell. Kana iwe uchida kuyedza imwe nharaunda yedesktop, unofanirwa kusarudza iyi link inoenderana nayo.
Saizi yeLiveCD iri pasi pe700 Mb uye inotsigira i686 uye x86_64 zvivakwa.
Hatigone kusarudza maficha anozoiswa pane yedu system, asi zvinonyanya kuita kumisikidza kushoma.
Cherechedza 1: Iyo haina rutsigiro ruzere rweSpanish mutauro, kuti uwane izvi verenga chinotevera chinyoreso: How To Fedora: Spanishizing yedu system (locale).
Cherechedza 2: Mamwe ma Screenshots haazoonekwe panguva yekumisikidzwa, asi maitiro akatsanangurwa akafanana;).
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kurodha pasi iyo ISO mufananidzo kungave kubva kune yepamutemo webhusaiti, girazi kana nerukova. Kana tangove neiyo ISO pakombuta yedu, isu tichaenderera mberi nekupisa zvakataurwa mufananidzo paCD, DVD kana kana uchida, unogona kugadzira bootable pendrive.
Nhanho inotevera ichave yekumisikidza iyo BIOS yekomputa yedu kuti tikwanise kutanga takananga kubva paside ratakasarudza Tevere tinosuma chishandiso uye tanga iyo michina.
Mufananidzo wekutanga uyo uchaonekwa unotevera:
Sezvauri kuona, isu tine sarudzo mbiri, dzandinotsanangura zvishoma.
Isa kana kusimudzira Fedora
Iyi sarudzo inotibvumidza kuisa kana kugadzirisa iyo Fedora vhezheni (kana yatove yakaiswa pakombuta yedu). Iyi sarudzo inobatsira kana tine chokwadi chekuti hatizove nezvinetso nekadhi kadhi kedu kana tichiisa. Ndiri kurevei neizvi? Zvakanaka, mandiri makomputa angu ane makadhi eNvidia uye nguva nenguva ndine matambudziko ekuisa mamwe ma distros (seFedora) kuburikidza neiyo graphical interface, semuenzaniso, iyo skrini yakasviba, yakakamurwa kuita zvikamu zvinoverengeka uye izvo zvikamu zvinoita kunge yakarongedzwa imwe kuseri kweimwe. Neichi chikonzero kana mamiriro akafanana pane yechipiri sarudzo mune irondedzero:
Iyi sarudzo inobatsira kwatiri kubvisa dambudziko rinogumbura randakakuudza pamusoro. Iko hakuna dambudziko kana iwe uchida kuisa kubva pane iyi sarudzo, hongu;).
Mushure mekusarudza chero sarudzo mbiri, iyo system inotiratidza iyo yekuisa wizard :). Mubvunzo wekutanga watichapindura uchave: mutauro. Iyi sarudzo yakakosha, sezvo yedu sisitimu ichagadziriswa zvichienderana nemutauro wakasarudzwa.
Pano tinosarudza maratidziro ekhibhodi yedu kutenderana nemutengi: P, marongero akajairika evatauri veSpanish ari anotevera: Spanish neLatin American.
Chidzitiro chinotevera chinotibvunza isu mhando yemidziyo kana Hardware yatakabatanidza kune yedu komputa. Kazhinji sarudzo yekutanga inokwana zvingangoita zvese zvishandiso, yechipiri sarudzo ndeye kugadzirisa kana kumisikidza imwe yakasarudzika dhizaini.
Isu tinosuma zita ratinozoziva naro michina yedu mukati metiweki.
Tinosarudza nyika yedu nenzvimbo yedu yenguva. Pazasi tinogona kuwana sarudzo yekushandisa UTC (yakarongedzwa nguva yepasirese) kana kwete, kana iwe uine imwe sisitimu yekushandisa yakaiswa pakombuta yako (semuenzaniso: Windows), zviri nani kuti usasarudze iyi sarudzo.
Tinofanira kunyora pasiwedhi kune maneja kana mudzi account. Zano rekare nderekuti vanoshandisa password yakakura kupfuura mavara masere ane: mavara, manhamba uye mamakisi ekumisikidza kuti ive yakachengeteka sezvinobvira, iwe sarudza;)
Kana iwe ukaregeredza zano rangu pamusoro, rinokumbira iwe kuti usimbise kana iwe uchida kuenderera uchishandisa password isina kusimba, kana zvirizvo, sarudza sarudzo Shandisa zvakadaro, zvikasadaro pinda kanzura uye gadzirisa kumhanya kwako pamusoro peXD.
Isu tinouya kuchikamu chakakosha uye chisina kusimba chekumisikidza, pano ini ndaizokumbira kuti unyatsotarisisa nhanho imwe neimwe yaunotora, nekuti kana tikaita sarudzo yakaipa tikashandisa shanduko, tinoisa njodzi yekurasikirwa neruzivo rwakachengetwa pane yedu hard drive TT .
Sezvauri kuona, isu tine sarudzo shanu, dzandinotsanangura.
Shandisa nzvimbo yese.
Bvisa iyo yose diski uye gadza Fedora. Iyi sarudzo inobatsira kana tichida kungove ne1 chete inoshanda system pane yedu diski.
Tsiva zviripo Linux masisitimu.
Muchiitiko chekuti paine zvidimbu nemaGNU / Linux masisitimu, anozotsiviwa naFedora.
Dzora iyo yazvino system.
Iyi sarudzo inokutendera kuti ushandure saizi yekuparadzanisa iyo Fedora kana chero GNU / Linux system ine.
Shandisa yemahara nzvimbo.
Kana uine nzvimbo yemahara pane yako hard drive, inozoshandiswa kuisa Fedora. Iyo inogona kuchinjiswa kune yako kufarira.
Gadzira dhizaini dhizaini.
Iyi sarudzo inotibvumira kuti tigadzire zvikamu zvedu nemaoko. Kana iwe usina yako diski yakatsigirwa, kana iwe uine data iwe yausingade kudzima uye hauna ruzivo USAZVIITA. Iyi sarudzo inobatsira kune vashandisi vanotova neruzivo rwekuisa GNU / Linux. Ini pachangu, ini ndinogara ndichiishandisa, nekuti zvinonditendera kuti ndikwanise kudzora zvandinoita kana zvandinoda kuita.
Sezvo paine nzira dzakawanda dzekuparadzanisa nekuisa Fedora pamakomputa edu uye nekuti ini handidi kuita kuti posvo iyi iwedzere, ndichakuratidza mashandisiro aungaita sarudzo yekupedzisira pakombuta yangu.
Zvakanaka, chinhu chekutanga kuita kusarudza yedu yakaoma dhiraivha. Mune ino kesi saizi iri 25 Gb, kana yangosarudzwa tinodzvanya bhatani Dza. Iyo dialog bhokisi inoratidzwa mune iyo skrini ichavhura uye isu tinosarudza Chikamu Chikamu uye tinobaya sika.
Mubhokisi rebhokisi rinotevera tinosarudza zvinotevera:
File system mhando: ext4 (ndiyo inonyanya kukurudzirwa sarudzo, asi unogona kusarudza zvinoenderana nezvaunoda).
Saizi (mu) MB: 15000 (ingangoita 15 Gb. Zvinokurudzirwa kupa 10 Gb kumudzi wekuparadzanisa, asi kazhinji ndinofarira kupa 15 Gb nenzira yekudzivirira, mune yangu ruzivo, huwandu hwenzvimbo inogara mune dhairekitori remamwe nevamwe Kugoverwa kweLinux kwave kubva pa8 kusvika 9 Gb, ini handina kumbobvira ndakwanisa kusvika gumi kune mamwe maapplication andakaisa XD).
Isu tinoenderera, sarudza iyo nzvimbo ichiripo uye tinya bhatani zvakare Dza.
Mount point: / kumba (dhairekitori uko ruzivo rwevashandisi vehurongwa rwuchachengetedzwa).
Saizi (mu) MB: Izvi zviri pamaonero ako zvinoenderana nezvinhu zvinotevera: Iyo inowanika diski nzvimbo uye inodiwa nzvimbo yeshanduko yekuchinjana (swap memory).
Panyaya yekuchinja, uye kutarisira danho rinotevera zvishoma, pane mutemo wakajairika (ndinoti zvakajairika nekuti hazvisi izvo izvi "Yakanyorwa nemavara egoridhe", asi ndiyo yakanyanya kukurudzirwa;)), saizi yechikamu ichi inotaridzwa seinotevera: tichagara tichiedza kugovera hafu yemari inowanikwa ye RAM mumakomputa edu, semuenzaniso: kana isu tine 4 Gb ye RAM, zvingave zvakanaka kupa 1.5 kusvika 2 Gb kuchinjanisa.
Saka nerubatsiro rwe arithmetic isu tinowana saizi yeyedu / yekuparadzanisa imba 😛
Pakupedzisira (pakupedzisira XD), tinosarudza nzvimbo yasara uye tinya bhatani zvakare Dza:
Mount point: hapana (sarudza chero chinhu)
Rudzi rweFilesystem: chinja (chinja memory)
Saizi (mu) MB: saizi yaunoda (mune ino kesi, izvo zvasara)
Kana iko kupatsanurwa kwediski kwapera uye kana zvese zvikanamatira pane zvaunoda XD, tinodzvanya Next (zvikasadaro, ivo vanogona kudzvanya Kutangazve kuita gadziridzo dzakakodzera usati waenderera nediski fomati, tora nguva yako, isu hatisi kukurumidza, zvakanaka?).
Sevha shanduko kudiski.
Tinomanikidza bhatani Fomati.
Izvo zvichatiratidza kufambira mberi kwekumisikidzwa kwezvikamu zve diski yedu.
Izvo zvichatibvunza kana isu tichida kuisa iyo boot loader (GRUB) pane yedu yakaoma dhiraivha (nekumisikidza) kana pane chimwe chishandiso (senge pendrive). Tinosunda Next.
Panguva ino ichatibvunza isu software ipi yatinoda kuisa pane komputa yedu. Mune ino kesi isu tinoda kuti iwe uise iyo "Graphic desktop" uye isu tinoshandisa zvinyorwa zvinouya nekutadza, asi pazasi isu tine sarudzo inonakidza kwazvo, nekuti apa ndipo patinokwanisa kugadzirisa maficha anozoiswa 100%.
Kana tikasarudza sarudzo Gadzirisa gare gare (gadzirisa gare gare), isu tichaisa Gnome Shell nezvizhinji zvekushandisa kwayo. Kana isu tichida kuisa imwe desktop desktop kana kutsiva kunyorera neimwe, isu tinofanirwa kusarudza sarudzo Gadzirisa izvozvi (gadzirisa izvozvi), kana uchiita izvi, inotevera skrini ichaonekwa:
Muchikamu chino tinogona kuita shanduko dzatinofunga dzakakosha. Tinogona kufamba mukati memapoka (akawanikwa kuruboshwe rwechidzitiro) uye sarudza kana kubvisa izvo zvinhu zvatinozowana pakombuta yedu pakupera kwekumisikidza. Kana shanduko dzaitwa, isu tinodzvanya Next.
Maitiro aya achatora nguva, saka ino inguva yakanaka yekunwa kofi kana mudzanga kuti usunungure tsinga dzako XD.
Pakupedzisira, maitiro ekumisikidza apedza: D, tinodzvanya Reboot (tangazve) uye usakanganwa kubvisa CD, DVD kana pendrive kubva pakombuta yako;).
Kana tangodzorerazve, tichaona uyu mufananidzo weGRUB, unotonhorera sei, handiti?
Kutanga iyo system mutoro.
Mhoro kune akashata ekare mabhutsplah: D.
Zvakanaka, izvo zvatinofanirwa kuita ikozvino kugadzirisa yedu mushandisi account, tinodzvanya Adelante.
Inotiratidza iro rezinesi ruzivo, isu tinoenderera.
Isu tinopinda account yedu data. Kukurudzira kumwe chete kwepassword yedu: yakakura kupfuura mavara masere, mavara, manhamba uye mamaki ekunyora;). Chinhu chakakosha kusarudza sarudzo: Wedzera kuboka revatungamiriri, kana iwe uchida kugona kushandisa iyo yakasarudzika command sudo pakati pezvimwe zvakanaka;). Tinoenderera mberi.
Isu tinoona kuti zuva uye nguva zvakanyatsogadziriswa.
Chekupedzisira, vanotikumbira zvine hushamwari kuti titumire chimiro chehardware chemidziyo yedu. Izvi ndezvekuitira kuti ubatsire mukusimudzirwa kweFedora, ngativei vakanaka uye titsigire chirongwa ichi nekutumira nhoroondo yedu, musazvidya moyo, kutumira kwacho kunoitwa musingazivikanwe;).
Takabudirira :), ikozvino isu tinongofanirwa kutanga nekumisikidza, fomati ... NAH XD, isu tinongofanirwa kunakidzwa naFedora pamakomputa edu: D.
Kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzirisa kugovera kwako, shandisa iyo blog yekutsvaga injini uchishandisa maitiro: Maitiro kuna Fedora: : D.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Sei KuFedora: Fedora 17 DVD uye LiveCD Kuisirwa
Iyo 2gb yekuchinjanisa inoita senge yakawandisa kwandiri, ini handina kumbobvira ndapa iyo inodarika 250 mb uye haina kumbobvira yanyunyuta, uye kune rimwe divi iri yakawanda mb yaunogona kuzadza nezvimwe zvinhu.
Asi huya pane izvi zvakavanzika kwazvo.
Chimwe chinhu ndechekuti iwe unogona kuita chikamu chechitatu chebhutsu chete, (ndinofungidzira kuti dai ndaive pachigaro, ndingadai ndakaramba ndiri mutevedzeri), asi ini ndanga ndatozviti zvinhu zvandisingazive kana zviri izvo kwete….
Asi chinja mutemo waunoti: Siya hafu yegondohwe rako ndangariro, ndinofunga kuti kubva pa2 gb yegondohwe, hazvidiwe.
Ngatiisei nyaya yekuti ndine 32gb yegondohwe (kana ini ndichitoziva kuti imhuka, asi muenzaniso ndinogona kufunga nezve pc yakanaka izvozvi 🙂), sekureva kwetsika yekare yaungapa 16gb, yaunopa 'kunyange kushandisa pawaini !!!
Saka yedzidziso yegondohwe yekare ndeye izvo chete kana zvirinani kwandiri !!!
Kune mamwe ese, akanyorwa zvakanaka uye akatsanangurirwa vashandisi vatsva veiyi inoshamisa distro inotsigirwa neRed hat, Zvakaipa sei chinhu chakatsigirwa chinonzwika ...
Kwazisai Perseus, ndinotarisira kuti hauzive zvisirizvo zvandakuudza
Pindura kune ianpock's
Usanetseke hama, ndatenda nemupiro :). Uye hongu, pamwe mutemo unosemesa, ndosaka iri zano, kunze kweizvozvo izvozvi nenzvimbo yakawanda pane hard drive 500 GB kana kupfuura, 2 GB kana kunzwa XD.
Kana 2 Gb yakanyanyisa, chii chavachazondiudza kana ndikamurega 10 Gb LOL ndinogara ndichisiya izvo zvekuchinjana nzvimbo 😀
Ini ndinoshandisa 2GB ... uye ini ndakakwanisa kushandisa ingangoita zana muzana reSAPAP yangu hahaha
Uchadya sei 2gb mwanakomana !!!
Zvakanyanya iwe unoronga ????
Zvinoita kunge zvakanyanyisa kwandiri, pamwe dai ndaive ne kde ndaizoida asi handei kwandiri swap yakasununguka nehafu yayo Gb ???
Asi uyai, kana imi mese muine gb mansalva munogona kundipa!
HAHAHAHA zvakanaka hongu… 1.9GB yeSWAP yangu yakadyiwa, uye 900MBs dze RAM dzakadyiwa futi… nditende, mazuva maviri seizvi uye ndaifanira kutanga kunetseka LOL !!!
XD, zvese zvinoenderana nemushandisi: D.
Mubvunzo wakadzokera ku fedora, ini ndinoisa zvese zvandiri kushandisa KDE asi nharaunda yakaiswa muChirungu asi iyo koni iri muchiSpanish ndinoreva kana iwe uchigadzirisa zvinonzi zvarodha pasi uye zvese izvo asi nharaunda izvese muChirungu ndiri kuenda kumitauro sarudza Spanish inobatana ne repos yum, asi nharaunda ichiri muchirungu
Tarisa uone kana uine package yakaiswa:
Kana iwe uchinge watoisa iyo, saka zvinoenderera mberi ndezvekugadzirisa kde kuti uchinje mutauro wehurongwa, kuti udaro, enda kune zvaunofarira zvehurongwa, nzvimbo kana yemuno uye ipapo mucherechedze mutauro wechiSpanish, unogona kugadzirisa zvimwe kana uchida. Kana izvi zvaitwa, vhara chikamu uye upinde zvakare uye unofanirwa kunge uine kde muchiSpanish;).
Zvakanaka, tarisa zvavanokurudzira nezveFedora http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/17/html/Installation_Guide/s2-diskpartrecommend-x86.html
Iyo poindi yandinofarira zvakanyanya kubva pa256 kusvika ku512 GB yegondohwe, kushomeka kushoma kwe32Gb.
Ndinozviona zvakanyanyisa kumushandisi akajairika, chimwe chinhu icho pano chinokurudzira izvi nekuti vari kuzoona, zvandinotaura ndezvekuti zvinoita kunge zvinokurudzirwa kumakambani.
Ndatenda shamwari, asi hongu iwe haugone kuve, makorokoto pamudzidzisi.
Zvakanyatsotsanangurwa Perseus. Ini ndinogara ndichida kuisa kubva kuDVD saka ini handifanire kuwedzera zvimwe zvinhu kubva kunetiweki. Zano randinoda kuwedzera, kana uchizo gadza Fedora ne KDE, zviite neSpin, kwete kubva kuDVD; inoshanda zvirinani nenzira iyoyo.
Ahhh, ini ndaisaziva nezve iyo KDE. Ndatenda mukoma;).
Imhaka yekuti DVD inouya ne KDE mu "mbishi"; pachinzvimbo iyo Spin yakagadziriswa uye yakagadzirirwa kumhanya paFedora.
asi kutenderera kwe lxde hakuendi zvakanaka, wifi inodonha mumasekondi maviri ega ega !!!
Ini handina kuyedza iyo lxde.
Yoyo Fernandez akadaro
Ini ndaimbove mushandisi weFryer,… ndine urombo, ndaireva Fedora. Ndakanga ndiri kwenguva yakareba uye ikozvino kubva pakuona zvakanyanya izvo zvaunotaura nezvake zvakaita kuti ndide kuva naye zvakare xDD
Pindura kuna Yoyo Fernández
Ini ndinofunga chinhu chakafanana chinoitika kwauri, iwe uri mumwe we hummingbird ine distros *
Zvirinani zvinoitika kwandiri, kune akanakisa madistros, zvakanyanya nezuro ndanga ndichiyedza zambuko linux handizive kana paine munhu anozviziva Mr. Perseo zvechokwadi
Ini ndoda kuyedza ... saMageia, Sabayon naChakra ... chete, kusvika parizvino laptop yangu yakagadzikana uye inoshanda neDebian Testing, zvekuti ini pachangu ndinozvidzora kubva pakumisa kubva ku distro kuenda ku distro, nekuti zvinondiita kurasikirwa nenguva kubva kubasa haha.
XD, ndatenda nerumbidzo hama ...
jamin samuel akadaro
Perseus ... hapana chikonzero chekugadzira / bhuti kugovera?
Ini ndinonzwisisa kuti mu fedora 16 waifanirwa kugadzira chikamu chinonzi / BIOS (ini handirangariri chaizvo kana zvakanyorwa seizvi) .. chinhu ndechekuti uzive kana mune iyi vhezheni nyowani iwe unofanirwa kugadzira iyo chikamu kana kwete ?
chimwe chinhu chidiki .. pakutanga kwechikamu iwe unogona here kuchinja iwo mufananidzo weiyo pyrotechnic maroketi?
Pindura kuna jamin-samuel
Zvakawanda sekugovaniswa kwe / bhutsu kunenge kuri madikanwa, kuchichiita chinosungirwa, kwete, asi zvinokurudzirwa Ini handisati ndamboda kugovera partition ye / boot, kana iri / BIOS partition, ini handina data, ndine hurombo: P. Chaizvoizvo ndiyo nzira yandinowanzo gadzira hard drive yangu yeGNU / Linux.
Kana zviri zvekuchinja mufananidzo weiyo GDM, zvirokwazvo unogona :).
ahh ok ok. Ini ndanga ndave kutonetsekana ... ndakafunga kuti / bhuti kupatsanuka kwaive kwakakosha ... ini ndinonzwisisa kuti kernel inochengetwa imomo ... asi sekuBuntu, chikamu icho chinogona kugara murunyararo mukati me / chikamu
hama yangu ndine hurombo zvinokunetsa zvakanyanya .. ungachinja sei mufananidzo weGDM?
ndeyekuti mu ubuntu 12.04 iyo imwe yandinayo seiyo Wallpaper inoiswa otomatiki uye ndinoda kuziva kana izvo zvakafanana mu fedora
iyo / bhuti kupatsanura yakagadzirirwa bhuti kune izvo, asi mudzi unogona zvakare bhuti (bhuti) yako system 🙂
Ivo mamanias, kumagumo kune chiuru nzira dzekuita zvinhu, rusununguko rwune izvo ...
Ubuntu inoshandisa LightDM uye Fedora (Gnome) inoshandisa GDM semaneja wechikamu, saka zvakafanana hazvisizvo;).
ahh asi ipapo haugone kuchinja iwo mufananidzo wemaroketi kuenda kuGMD? : /
Kana iwe uchikwanisa kuchinja iyo yekumashure mufananidzo;).
Ndine mubvunzo zvishoma kunze kwepositi ..
Pamwe KZKG ^ Gaara naELAV <° LINUX ndivo vachatanga kupindura ..
Zvinoita here kuisa Cinnamon paDebian Kuyedza uye Sid? uye sei kuzviita.
Ndinoziva kuti inogona kuiswa paFedora ... asi ini handina kumbobvunza kana ichigona kuiswa paDebian futi ... kunyanya paSid
Zvinotaridza kwandiri kuti elav anoishandisa kana kuishandisa muDebian Testing, handifunge kuti pane dambudziko muSid. Nezve maitirwo azvo, hapana zano: P, ini handina kumboishandisa Sekuru Clem neni, hongu ndinoziva, Kushinga kuUbuntu zvandiri kuLM XD), uyezve handina kana mifananidzo yeDebian pakombuta yangu :(.
ahhh ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfiiti chete chete gnome3, gnome
Perseus uye ndingaite sei kuisa Cinnamon mu fedora 17 .. Ndiri kufara kwazvo nezvese zvawakaburitsa nezvekuyedza fedora zvakare ^ _ ^ ndosaka ndichibvunza mibvunzo yakawanda kuti ndisapinda mumatambudziko uye kana zvichikwanisika kugara ikoko mu fedora
Nyore: (ziso, izvi ndezve F-16)
curl they http://repos.fedorapeople.org/repos/leigh123linux/cinnamon/fedora-cinnamon.repo -o /etc/yum.repos.d/fedora-cinnamon.repo
yum kuisa sinamoni
Pfungwa: Handizive kuti nei vachizvifarira zvakanyanya ... chokwadi ndechekuti zvinotyisa (kwandiri zvirinani).
Ingoitika kana ini ndichijekesa: Izvo zvakakosha kuti uve neGnome-Shell yakaiswa.
Ndatenda !! .. zvakanaka maererano nemubvunzo .. zviri nyore kupindura
inogadzirisika .. munhu wacho anoita neiyo "barirta" izvo zvinomukwanira .. nezvose zvinogona kuitika kwaari ..
Ini ndinoshandura ma icon, kuwedzera maaplet, ekuwedzera, nezvimwe.
Semuenzaniso, ini handipedze anopfuura mazuva manomwe ndiine nharaunda ... ini ndinogara ndichigara ndichichinjika pakati pegnome shell nesinamoni ... kuti ndisazobhowekana nekuwira mutsika yekufa nebasa rimwechete uye imwechete nharaunda
Juan Carlos .. Ndanga ndisina kuziva .. chii chaitika .. sei usiri kushandisa Fedora? : KANA
uye tsime sinamoni inongova pembedzo yekunzwa kujairana uye kusarega kuyedza Fedora ^ _ ^ hehehe
«Juan Carlos .. Ndanga ndisina kuziva .. chii chaitika .. sei usiri kushandisa Fedora? : KANA ".
Nekuti ndakafunga kuisa U-12.04 palaptop yangu nekuti iri LTS, uye ndiwo mudziyo wandinoshandisa zvakanyanya. Kana F-17 yabuda ndichaiisa pane desktop PC yandakagadzirira kuimirira. Muchidimbu, kuyedza kurapa yangu versionitis naFedora… .hahahaha
Izvi zvinopindura mubvunzo wako here? https://blog.desdelinux.net/how-to-fedora-instalar-cinnamon-como-alternativa-a-gnome-shell/
Kunyangwe ndichiona kuti shamwari yedu Juan Carlos akatotitarisira nemhinduro XDDD ...
@Jan Carlos Ndatenda mukoma: D.
tarisa zvandakangoitirwa nemumwe wangu ..
Yakanakisa Nyowani muFedora 17
iwe unogona kutora chimwe chinhu chakanaka kubva ipapo kuti uite posvo pano nezvazvo 😀
«@ Juan Carlos Ndatenda mukoma». Iko hakuna chikonzero, chekare Fedorian tsika, kana ini ndichiziva iyo nyaya yandinobatsira.
Uye, kunze kwenyaya, ichokwadi here kuti Facebook ichatenga iyo Opera browser?
Iko hakuna chikonzero, chekare Fedorian tsika, kana ini ndichiziva iyo nyaya yandinobatsira.
@Jan Carlos Ini ndinonyatsoda iro zano hama: D. Iwe unoziva kuti <° KubvaLinux chero rubatsiro runogamuchirwa;). Kana iri Opera, yakatanga seguhwa, asi yakawana simba rakawanda, vamwe vakatosimbisa nhau yekuti Facebook iri mukutaurirana navo. Iko kune kunyange kutaura kuti ivo vanoda kuvhura iyo Android forogo nerubatsiro rweaimbova Apple mainjiniya. Ini pachangu handifarire chero ehwahwa aya: (.
Wow, chinyorwa chikuru pane iyi link, ndichachiisa mune yangu posvo Fedora 17 inoburitswa zviri pamutemo sereferenzi, haina marara.
Ndatenda mukoma :).
john joseph akadaro
Ini pachokwadi handina kushanda fedora ... ini ndaida kuyedza sezvo vachiti yakanaka kwazvo handizive kuti chii ... asi ini ndakaisa yakakwana livecd uye painotanga screen inoramba iri chena hapana chimwe.
Pindura Juan Jose
haikutumire chero kukanganisa kana chimwe chinhu chingatipe chiratidzo. Wakaisa grub nenzira kwayo here?
Ini ndinoisa zvese zvakajairika ... ini ndakatoiisa pane netbook nenzira imwechete uye ndakafamba: S
desktop yangu pc pane amd 955 ine 4gb uye radeon 6870
Zvakanaka, chandingafungidzira kubva pane izvi ndechekuti ingangove yako kadhi yemifananidzo iri kukonzera dambudziko, kana iwe ukakwanisa kuwedzera rumwe ruzivo nechimwe screnshot, nezvimwe, ini ndingafarire, ndinozvitaura kuitira kuti ndirege kuva bofu : P.
Zvinoshamisa kuti cd inorarama yakawana sei mafuta, kune inotevera ichave iri shoma ye1gb yegondohwe ???
Ini handina kunzwisisa, hukama hupi hune hukuru hwe LiveCD uye saizi ye RAM?
Basa rakanakisa, Perseus, iwe wakandikurudzira kuti ndiedze Fedora ... seDebian akanaka ini ndinoda kumbocheka uye kudzidza. 😉
Kugadzira gomba kwaari padhuze neangu Debian wandinoda kwazvo, kunyangwe ini ndaita dambudziko mushure mekumisikidzwa, pamwe nekuda kweku "kusiiwa" mukugadzwa kunoitwa kwandiri, kuti uone kana uchikwanisa kundipa rimwe zano rekugadzirisa dambudziko.kucherechedzwa kwedistro neiyo grub iyo yakatanga kuiswa naDebian pasina kupwanya iyo yekutanga grub.
Pakusvika nhanho: «Inotibvunza isu kana tichida kuisa iyo boot loader (GRUB) pane yedu hard drive (nekumisikidza) kana pane chimwe chishandiso (senge pendrive). Tinodzvanya Inotevera. » Zvakanaka, ini handina kumaka "gadza bootloader pa / dev / sda" bhokisi rekutarisa. Ini ndanga ndisingade kunyora pasi rangu rekutanga grub, ndichifunga kukwidziridza gare gare kubva kune iyo terminal muDebian ine yekuvandudza-grub, asi iko kuchangobva kuiswa kweFedora hakuna kundiziva.
Chero kurudziro? Ndotenda zvikuru!
Zvakadii hama, ndine hurombo nekunonoka;). Nei usingaise pasuru yacho:
kuitira kuti painogadzira iyo nyowani grub yekumisikidza inogona kuona kuvepo kwemamwe masystem anoshanda :).
Kwaziso nekutenda nekuda kwemashoko ako: D.
Mhoroi, chii chandingaite kana mutauro wekumisikidza ukasandisiya? zvinongonditumira kusarudzo yekhibhodi yemutauro. Ini handidi kuti system yangu ive muChirungu, pane mumwe munhu angandibatsira ???
Pindura kuna ronald
Wakadii hako ronald, ndine hurombo nekunonoka;). Handina chokwadi kana iri bhagidhi muFedora anaconda simaki, asi sekutaura kwako hazviratidze sarudzo yekusarudza mutauro. Unogona kuita zvinotevera, gadza Fedora wobva wachinja marongero emitauro kubva kune desktop desktop yako, kana uchida rubatsiro, bvunza, sezvo ini ndisingazive chaizvo nharaunda yaunoda kuisa (KDE, Gnome, XFCE, LXDE, nezvimwewo), kuti ndikuudze zvakawanda kana zvishoma nzira ipi yekutevera
Iyi posvo inogona zvakare kukubatsira iwe muchidimbu:https://blog.desdelinux.net/how-to-fedora-espanolizando-nuestro-sistema-locale/
Ehe, ini ndakawana mhinduro! ndatenda 🙂
Iye zvino ndine rimwe dambudziko nezvikamu
Iyi ndiyo yangu yazvino system. Gadzira chikamu mune chisina kugadzirirwa kungoisa Fedora ipapo. Sezvandakaita kare neBuntu 11.10.
Zvakanaka pfungwa ndeyekuti pandinoyedza kushandisa iyo 'shandisa yemahara nzvimbo' kana 'kugadzira tsika marongero' sarudzo ini ndinowana iko kukanganisa "haina kukwanisa kugovera zvikamu zvakakumbirwa - isina kukwana nzvimbo yemahara pamadhisiki"
Chinhu chisingazivikanwe ndechekuti neUbuntu haina kumbondikanda matambudziko, ikozvino neF17 yandinoyedza kuiisa inotsamwisa: ehe kana ndikabvisa Ubuntu nekuti yaive yakaipa nefeni uye nekushandisa simba kweLenovo yangu, iyo nenzira yakauraya bhatiri rangu uye ikozvino Zvinongogara 1h chete pa---
Ndinovimba unondibatsira nezve kunetsekana uku, ndainyanya kuda kuyedza Linux uye ini handidi kuisiya zvachose.
Zvakanaka, kubva pane zvandinonzwisisa, iyo yekumisikidza inokuudza kuti iwe hauna nzvimbo yemahara yekumisikidza iyo distro, izvi hazvisizvo nekuti iwe une partition yekuzviita, izvo iwe zvaungaite kuratidza kwaunoda kuti iiswe nenzira inotevera:
Iwe unotanga mugadziri kazhinji uye kana ikakubvunza iwe mhando yekumisikidza, sarudza: Gadzira chimiro chetsika. Iwe uchaona chifananidzo chakafanana neicho chinowanikwa munzvimbo yegumi (kuverenga kubva kumusoro kusvika pasi) cheiyo posvo, kana iwe ukachiwana, handiti?
Wobva wasarudza iyo partition Asina kupihwa nzvimboSaka kuti usarasike, iwe unogona kutungamirwa nehukuru hwechikamu, icho chingangoita 176,097 MB.
Iwe tinya pane sarudzo Hora Iwe uchaona mufananidzo wakafanana nemufananidzo 11, tevera maitiro uye enderera pamufananidzo 12.
Iwe unopinda sarudzo:
Nzvimbo yepamusoro: /
Rudzi rweFilesystem: ext4
Saizi Mb: iyo huwandu hunokuratidza iwo saizi yekureva partition.
Unopa OK, kuti udzokere kuchiratidziro chekare. Nechekare pachiratidziri ichi unodzvanya Next kuenderera nekumisikidza;). Cherechedza: Kana iye akakubvunza iwe kana iwe uchida kuenderera pasina kupa nzvimbo yekuchinjanisa, iwe unoti hongu.
Iyi ingave iri nyore uye yakapusa nzira yekumisikidza Fedora, yakanakira kuyedzwa chete, haina kukurudzirwa kugadzirwa: zvine simba yakawedzerwa, kana usati uine imwe, kuitira kuti mushure maizvozvo iwe ugone kugovera chikamu chimwe chete ichi (chakakosha redundancy: P) muzvikamu zvitatu kana zvina pamwe chete ne / (mudzi), / imba, / chinjana uye / bhuti. Kana iwe uchida kuti ndikutungamire neizvi, ingo ndiudze ini :).
Ini handina kunzwisisa, chii hukama pakati pehukuru hwe LiveCD uye saizi ye RAM? [/ Quote]
Zvakareruka, kana tikadhawunirodha iyo live kuisa semuenzaniso xfce kana lxde, inotikumbira 700 uye yakareba Mb yegondohwe, uye kana tine 256 hatizokwanise.
Ndiri kuona izvi zvisirizvo, nekuti zvakanaka kuti kune gnome kana kde iwe unoda 1gb yegondohwe (nenzira iyo webhusaiti inoisa zvishoma zvinodiwa 1GB RAM), asi mu xfce kana lxde zvinoita kunge zvakawandisa ...
Haisiyo nyaya yangu sezvo ndine 1gb ram laptop, asi ini ndinofunga iro rakajeka desktop rinofanirwa kuve riine live live cd distro.
PS: Ndakaedza izvi nekutenderera kwe lxde uye kutenderera kwe xfce
Zvakanaka, hongu, ndinonzwisisa kuti hazvisi izvo zvakanakisa zvikwata zvine mashoma zviwanikwa, mune izvo zvingaite zvirinani kuisa hwindo maneja openbox, fluxbox, e17, razor-qt, shuga, kungotaura mashoma.
dr, byte akadaro
Yakanaka gwara, yakanaka kwazvo posvo.
Kuti unakirwe naFedora 17, ini ndakavandudza kuburikidza preupgrade.
Pindura Dr, Byte
Ndatenda nekupindura hama;).
Hi Perseus, ndakadzora 17 nenhema cd ndikariisa neiyo unebuttin, asi iri muChirungu uye pasina kana chinhu akandipa sarudzo uye kuisa kde, zvinonyadzisa nekuti ini handidi gnome shell zvakanyanya, chii chandinga unoita sei?
Izvi ndezvekuti iwe pamwe wakatorodha gnome Shell Live CD, LiveCDs inongova nedesktop nharaunda ingave Gnome, KDE, Xfce kana Lxde. Dhawunirodha iyo inouya ne KDE, http://fedoraproject.org/es/get-fedora-options
LOL! You are right raonant, it must be because of that, even so I am intrigued by the language, thanks I will download it, anyway I will leave updating kuti ndione zvinoitika, chokwadi ndechekuti ini handidzokere kuUbuntu!
kondur05 mu gnome iri muSystem Configuration / Mutauro Zvaunoda, (Hotcorner uye iwe nyora mutauro)
Unosarudza Spanish woisa pakutanga uye wozoisa bhatani kunyorera. Ini handina zano kuti zvinoitwa sei mu KDE.
Ndine newbie kuda kuziva, ndinogona here kuva ne kde uye gnome panguva imwechete mu fedora?
Ehe, ehe saizvozvo, mazhinji emastros anotsigira mazhinji ematafura ... tsvaga neplasma, ndinofunga ndeye kde-plasma-desktop, mushure mekuiisa iwe unosarudza iyo mune yekushandisa login.
maita basa neayurda lex, munguva pfupi ndichaibvuma (mukadzi wangu akandikumbira kuti ndiende kunotenga chimwe chinhu uye iwe unoziva… .hehe).
Kutenga? : S Ndinokunzwisisa zvakakwana… Ipapo tichanyorerana mangwana.
Zvakanaka ini otine kurodha kde yegnome uye kurodha pasi spin ye fedora kde, uye chokwadi ndechekuti ndinoda kde, uyo anoseka .. gnome sekutaura kweimwe linux kunze uko lol. Ichokwadi ndechekuti, gnome inoita kunge izvo zvinhu zvinoisa mabhiza mumaziso kuti vagone kuona rimwe divi, nekuti pane zvishoma zvaungaite kuti uzviise kune zvaunofarira. shamwari lex ndatenda nerubatsiro
Mario Hernandez akadaro
Mhoroi, ndine matambudziko ekuiisa pane yangu HP Mini 110-3124la, sezvo zviri pachena kuti haina CD / DVD muverengi, inguva yangu kuenda kuUSB uye apa ndipo pane dambudziko rangu m usb iri 4GB, uye ndakambozama muPendrive Linux, Unetbootin uye kunyangwe iyo imwechete USB Fedora uye inokanda ini zvikanganiso senge Kukundikana panguva yekumisikidzwa uye zvinondiudza kuti iyo Bootloader inokundikana uye kuti haigone kubhuroka, uye izvo zvinosara nekukanganisa mune sda, imwe kukanganisa izvo zvinondipa ndezvekuti marekodhi haapo paanofanirwa kunge ari paDVD uye ndinofanira kuatora, url yeiyo isina zano uye kusvikira yaenda, rimwe dambudziko randinaro nderekuti mudzi / handikwanise kuzviita chikamu chekutanga sezvo Ichiti hapana nzvimbo inokwana, kuziva kwakadii uye kuti ine senge 20 GB yenzvimbo inowanikwa muchikamu.
Ndiwo matambudziko andinayo, mhinduro iri pachena kupisa DVD uye kuiisa neCD / DVD yekunze, asi ini handina mari yekuwana imwe, ndoda kukwereta imwe, ndinoda kuziva kuti ndeipi imwe mhinduro dzaunogona kundipa sezvo ini ndakarasa zuva rose nehafu ndichiedza kuiisa uye nguva dzose mamiriro akafanana, kwaziso nekutenda.
Pindura kuna Mario Hernández
Mario chinhu chakafanana chakaitika kwandiri asi ne openuse, uye chokwadi ndechekuti handina zano, chimwe chinhu ndechekuti fedora haidi kuvandudza
Mhoro hama, maita basa kwazvo, iyo dzidziso inonyatsotsanangurwa muchikamu chaunofanirwa kusarudza sarudzo kuti uone kana iri mudiski rese kana zvikamu zvacho, ndatenda zvikuru
Pindura kuna gus
Zvinoitika kwandiri kuti dambudziko rako ringave rekuti hauna hunyanzvi hwependrive maererano nehukuru hweiyo iso DVD mufananidzo. Uine 4 Gb pendrive iwe unogona kuisa iyo iso CD chifananidzo chiri chinosvika mazana manomwe Mb.
Pindura kuna isidro
Mhoroi, ini ndiri mutsva uye ndinoda rubatsiro rwekuisa chirongwa mu fedora 17, kungave kwakasarudzika zvirongwa zve linux kana izvo zve windows izvo zvinoti unogona asi iwe unofanirwa kuisa imwe inonzi waini kana nime kana yangu.
Ini ndoda kudzidza kuisa. ini ndoda kuisa inokurumidza iyo iri yekuverenga uye ini ndoda kuyedza mu fedora kana ichishanda.
uye ndinogona kushandisa windows 7 uye linux fedora. ndiko kuti, paunotanga komputa unogona kusarudza chero eiri.
uye kana iyo linux fedora vhezheni 64 inokurudzirwa kana kwete. ivo vanotaura izvo zvekuenderana kana madhiraivha kana zvirongwa
kwaziso uye yakanaka kwazvo dzidziso. Zvingave zvakanaka kune mimwe misoro senge izvo zvandinobvunza nezve maitiro ekuisa mapurogiramu ari .ex kana windows, uye ayo e linux.
Ndakaona mimwe mirairo muvlc player, kuti uiise iwe unofanirwa kuikopa muTERMINAL $ uye wozopa eenter uye ndizvozvo?
Ndapota ndinoda rubatsiro. email yangu mcollado77@yahoo.com
kukwazisa uye kubudirira muzviitiko zvako zvezuva nezuva
Mubvunzo, ichokwadi here kuti LiveDVD inokutendera iwe kusarudza Fedora ndeupi maneja maneja waunoda kuisa?
Komputa yangu yakanyanya… asi ZVAKAKWANISWA zvishoma muzvishandiso, uye ndinoda kuisa Fedora kare neFluxbox neXLDE.
Zvakanaka ini ndine ruzivo rwakashata ne rpm distros, asi yakanaka dzidziso kune avo vanofarira fedora.
Ini ndinokurudzira zvimwe iyo livecd, iyo dvd vhezheni saka haisi kazhinji inowanzo nyatso kuyedzwa.
Mhoro shamwari, ndine dambudziko kana ndichida kuisa kana kutarisa iyo Fedora 17 mhenyu diski, ini handiwane mufananidzo pachiratidziri.
Iyo kadhi yemifananidzo yandinayo ndeyeNvidia GTX-550Ti, uye iyo yekutarisa ndeye LG TV, zvisati zvaitika, nguva refu ndisati ndamboita fedora 7, uye ndakazoona iri yakanaka kwazvo ... uye ikozvino ndoda kudzokera ndorangarira chii Ndakanga ndadzidza panguva iyoyo. Ndosaka ndichikukumbira rubatsiro diki ndapota.
edza iyo paramode yemodhi mune kernel
Ini ndakaisa Fedora 17 desktop pane 32-bit laptop ine 512 yegondohwe chete uye 1.6ghz uye 64mb xD vhidhiyo kadhi.Ndinoziva kuti inononoka asi vakandiudza kuti zvaigona kungoitwa chete ne700mb yegondohwe uye kuti zvaisazo rega ndiise asi kubva kuFedora ndiri kukunyorera uye zvinoshanda zvakakwana neine lag diki pakuvhura zvirongwa pamwe neFirefox yakatora anenge masekondi gumi kuti izarure asi ichiri kushanda nemazvo chaizvo kune laptop ine 10mb yegondohwe
Pindura kuna Joseph
Ndine mubvunzo 'mudiki uye pamwe wakapusa;
Ini ndinowana sei iyo "Boot GRUB Menyu" dhizaini. Ndiri kureva iro remberi Wallpaper, iro sarudzo bhokisi uye yekufambira mberi bar. Ndinoda kuve neiyi dhizaini pane yangu GRUB.
Mhoro shamwari, ndanga ndichiona iyi dzidziso asi haindishande kubva pandakaburitsa fedora 18 KDES live (Kubva pane yangu nvidia graph vakandiudza kuti gnome yaisazoenda zvachose) uye iwo haasi mamwe matanho, iyo dambudziko nderekuti ini ndinoita yekumisikidza nezvose asi pandinotangidza komputa yangu GRUB haipo uye inotanga chete pawindows 7, ndakaedza kuisa grub nemaoko asi iyo live cd haina kundiratidza console mode (kumwe kununura zvichienderana tutorials) Ini ndinogona chete kupinda mhenyu yekupinda terminal uye mirairo haishande kwandiri.
Ndiri kutumira iyo fuck ku fedora uye pasi pe suse = / asi kudzokera ku ubuntu kana imwe distro
chero rubatsiro nenyaya yangu kana pasi peiyo DVD vhezheni ye fedora?
Pindura kuna Maka
Jorge Luis akadaro
Mhoro ... zvakanaka ndanga ndine dambudziko nekumisikidza, ndakaita zvikamu zve disk momo zvinoratidza asi hazvindibvumidze kuti ndienderere mberi, pandinoisa «inotevera» inondiudza: «haina kugadzira nhanho 1 bootloader pa chipfuro chipfuro »
Pindura kuna jorge luis
Pane mumwe munhu angandibatsira ndapota
Jorge Luis, unogona kugadzirisa dambudziko rako here? Kana zvirizvo, wakazvigadzirisa sei? Zvido!
Mhoro Jorge Luis, wakakwanisa kugadzirisa dambudziko rako here? Kana zvirizvo, wakazviwana sei? Zvido!
How To Fedora: Simudzira kune iyo New Shanduro nePamberi
Sei KuFedora: Isa Nvidia GeForce 6/7/8/9/200/300/400/500 Madhiraivha